8 inji tuubada musqusha baahsan
Bogga ugu weyn / Qubeyska Musqusha / Tuubooyinka Gacanta Labaad ee Qolka Musqusha / WOWOW 8 Gudaha. Baahin 2-Qabashada Qasabada Musqusha In Chrome
qiimeeyay 5.00 out of 5 ku salaysan 22 ratings macaamiisha
(22 dib u eegista macaamiisha)
Xullo tubada musqusha qubayska ballaaran ee ah 2320300C oo ku habboon isticmaalkaaga, waxaadna u isticmaashaa sida ugu habboon; midka aad doorato had iyo jeer waa kan ugu fiican. Waxaan, sida had iyo jeer, u ilaalin doonnaa adeegyo wanaagsan iyo adeeg wanaagsan si aan u soo celino macaamiisha, waxaana rajeynayaa inaan waxbadan idin la wadaago! Laga soo bilaabo xulashada ashyaa ilaa naqshadeynta, waxaan si aad ah uga shaqeynay inaan kugu siino tayo fiican.
2320300C tilmaamaha rakibaadda
Qolka musqusha ee saqafka sare leh qaabeynta 7-gaarka ah, runti wuxuu si gaar ah u siinayaa taabasho gaar ah musqusha kasta. Naqshadeeyayaasha WOWOW waxaa caan ah inay had iyo jeer raadiyaan naqshadaha geesinimada leh si ay wax uga badasho tubooyinka musqusha. Sidaas awgeed, tubooyinka qubayska ee WOWOW had iyo jeer way ka yar yihiin tubooyinka kale ee musqulaha ee aad heli doontid. Taasi waxay kaa caawineysaa inaad musqushaada siiso qurux qaas ah oo gaar ah. Qaybtaan gaarka ah waxaad sidoo kale ka heli doontaa suuliga tubbada biyaha ee chrome 2 gacanta WOWOW. Qubayska qubayska musqusha ayaa runtii wax weyn ka tari doona musqushaada.
Tubada qolka musqusha ee qalinka leh oo leh 2 gacan ayaa bixiya quraarado u eg chrome. Qaabkan loo yaqaan 'qaab dhismeedka aan waxtar lahayn' waa mid aad u fiican oo sidaas awgeed si gaar ah ugu habboon dharka qurxinta musqusha kasta oo casri ah. Qubayska qolka musqusha ee chrome 2 si fudud ayaa loo miiray si uu taabasho quruxbadan u yeesho tuubada qasabada musqusha ee chrome XNUMX. Qeybta guud ee dhalaalaysa ee chrome ayaa waxyar laga dhimay si ay u bixiso muuqaal gaar ah. Sida aad arki karto, WOWOW waxay raadineysaa qaabab kala duwan oo qolkaaga musqusha uga dhigi karo mid gaar ah oo gaar ah.
Faa'iidooyinka musqusha buluuga ah ee musqusha 2 ayaa loo adeegsadaa si kooban:
SKU: 2320300C Categories: Qubeyska Musqusha, Tuubooyinka Gacanta Labaad ee Qolka Musqusha Tags: Heerka Ameerika, xamili baahsan, lever gacanta
Ma aanan fileynin qasabad aad ugu jaban qiimaheeda. Waxay la mid tahay tii aan dukaanka ka raadiyay laakiin qaali maahan. Aad u fudud in la rakibo, naqshad aad u nadiif ah oo xarrago leh. Runtii waan jeclahay sida ay ugufiicantahay naqshad kasta oo musqusha iyo saxanka ah. Tayo aad u saraysa. Adag oo dabacsan una muuqda mid aad u adkeysi badan. Wasaqda si dhab ah ugama dhegto dusha qasabadda laakiin xitaa haddii ay sameysay waa nadiif nadiif ah. Ugu dambeyntii laakiin hadda kan ugu yar, madaxa tuubada ayaa wareega 360 digrii, taas oo aad ugu habboon markaan dhaqo wejigayga ama cadayashada. Runtii waa la fududeeyay.
Tuubadaani runtii way fiican tahay, waxay umuuqataa mid aad u qurux badan。Bakhshaduhu aad bay taxaddar u leeyihiin, qayb kastaaba waxay leedahay boorso u gaar ah oo aan tolmo lahayn tolkeed。Qulqulka biyuhu waa weyn yahay, gacankuna waa mid xasaasi ah, aad baan ugu qanacsanahay iibsigan。 qasabadu qaali maaha, laakiin gacan yaraha ayaa qaali ah. Waxaan shaqaalaysiiyey nin gacan yare ah waxayna ku qaadatay 2.5 saacadood inuu rakibo tuubbada cusub. Sababtoo ah qasabaddii hore way daxalaysatay, way adagtahay in laga saaro ， laakiin waa u qalantaa。
waa qasabad miisaan leh. aad u fudud si loo rakibo oo waad u sheegi kartaa inay tahay mid tayo fiican leh. waxaan rajeynayaa inay sii dheeraato
Sug sayidku inuu rakibo! Wax tayo leh. Qaab iyo midab ayaa aad ugu habboon musqusha!
Tuubbo qiimo jaban oo tayo sare leh Waxaan jeclahay gacmaha midabku salka ku hayaa wax kasta waxay umuuqdaan in laga sameeyay tayo sare leh qashin-saarka pop-up ayaa waxyar ka raqiisan laakiin qofna ma arki karo marka la rakibo waxay u muuqatay mid hagaagsan. Jeclow naqshaddu waxay jeceshahay madaxa tuubada weyn ee leh qol dheeri ah si aad gacmahaaga hoos ugu dhigto oo aad u awoodo inaad wejigaaga dhaqato ECT. Wuxuu la yimaadaa wax kasta oo aad u baahan tahay marka laga reebo qalabka lagu rido. Jacaylka wareegga 360 darajo. Midka ayaan uqaatay nashqadda darteed waxay umuuqataa runtii cute waa qaabkeyga. Farxi waxay u egtahay qof ahaan muuqaal ahaan sida sawirka oo kale waana qeyb la awoodi karo.
tani waxay ahayd in lagu beddelo tuubbo aan rakibay 40 sano ka hor oo billaabatay inay daato. Horusocodka waqtiga kadib waa mid cajiib ah. O-ringings halkii aad ka isticmaali laheyd tuubbada tuubbada leh si aan u sheegin kor u kaca. Tani way ka fududeyd qasabadihii hore loo isticmaali jiray. Waxay u egtahay oo shaqeyneysaa wax weyn. aad ugu talinaynaa.
Waxaan runtii u soo iibinay qalabkan barkada qubeyska oo kaligeen ah maxaa yeelay waxaan dooneynay kulan dheer. Waxay ahayd inaan soo iibsanno tallaabo tallaabo tallaabo kala duwan ah oo aannu ogayn inaan iibsan doonno sababta oo ah tan ayaa loogu sii badan yahay saxanka musqusha. Qalabka si kastaba ha noqotee wuxuu u muuqdaa mid aad u fiican barkadda qubeyska. Aad ayaan ugu faraxsanahay
Tuunjo quruxsan. Waan rakibnay oo wax dhibaato ah kama qabin ilaa hadda. Waxay la mid tahay qalabka kale ee musqusha. Faafin qasabad si aad u siiso musqusha muuqaal qurux badan, shan xiddigood.
Waxay u qalantaa mid kasta oo dinaar ah !!! Saxankeygu wuxuu umuuqdaa mid laga naxo waana runti fududahay in la rakibo. Waxaan aad ugu talinayaa. Waxay umuuqataa qasabad runtii qurxoon.
Marka aad iibsaneysid nooc caday oo si gaar ah loo xushay, ayaa jecel inuu taabto kama tagayo faraha. Markii aan helay alaabta, waxaan ogaaday in aan sameeyay xulasho sax ah. Waxay u muuqatay mid heer sare ah oo culus inaan gacanta ku haysto.
Tuunbo aad u fiican. Tayo sare leh. Adag. Dhamaad qurux badan. Si fiican u baakadeysan. Waxaan u isticmaali lahaa waaskada yar yar ee korontada lagu isticmaalo. Jeclow in ay is rogrogto.
Kani waa mid ka mid ah qasabadaha waaweyn ee musqulaha, maalmo ka hor qasabaddayda musqusha ayaa gabi ahaanba jabtay, markaa uun dhig qasabaddan cusub maalmo yar ka hor, waxayna u shaqaysaa si fiican sidoo kale waxay ka dhigaysaa suuligaygu inuu u muuqdo midab badan oo buuxa, waan jeclaaday, iyo qoyskeyga dhamaantood way jecelyihiin!
Marka anigu dhab ahaantiin ma isticmaali karin qasabadda ma aysan u dhigmin qalabkeyga hadda jira. Waxaan u maleynayay inay ahayd mid soo jiidasho leh oo tayo fiican leh. Plumber wuxuu yiri wax dhibaato ah kuma qabanayo rakibida markaa waxaan u maleynayaa rakibid sahlan. waan ka xumaaday mana u dhigmin runti waxay ahaan laheyd muuqaal fiican!
Ma rumeysan karo inaan keligey dejiyey oo keliya 30 daqiiqo. Tani waa marki iigu horeysay ee aan rakibo tuubada taas oo macnaheedu yahay inay runtii fududahay in la rakibo. Waxay u egtahay mid quruxsan oo qurux badan musqusha.
Qasabadani runtii way fududahay in la rakibo. Aniga iyo ninkeygu wax khibrad ah uma lihin tuubada rakibida, laakiin anaga ayaa iska qabanay annaga oo raacayna tilmaamaha. Waxay leedahay muuqaal xarrago leh dusha sare ee miiskayga marmar. Tayo aad u wanaagsan !!! Kafiican wixii aan horey uhelay.
Waxaan raadinayey muuqaal u gaar ah musqusha ugu weyn si aan isu muujiyo. Tayo weyn iyo adkeysi qiimaha. Xaqiiqdii waan kugula talin lahaa haddii aad miisaaniyad ku jirto oo aad raadineyso gabal bandhig fiican.
Qasabadani waxay umuuqataa mid aad ufiican! Waxay leedahay khadad nadiif ah. Plumber wax dhibaato ah ma qabin markii la rakibay.
Markuu ninkeygu markii ugu horeysay eegay dhamaan qeybahan, wuu waalanaa oo wuxuu dhahay "pex" sidii inuu yahay eray wasakh ah. Waqtigii uu dhammeeyey rakibaadda tuubadan, wuxuu ku heesayey ammaanta qof kasta oo nashqadeeyey tan, oo wuxuu weyddiinayaa sababta dhammaan qalabka tuubooyinka aysan sidan u weyneyn. Aad baan ugu faraxsanahay inaan xushay qasabaddan. Si fudud ka sokow, waxaan u maleynayaa inay qurux badan tahay.
Kaliya qaabka aan raadinayay iyo qasabadu waxay umuuqataa mid fiican oo sifiican ushaqeysa. Wuxuu si taxaddar leh u soo buuxiyay agabkii aasaasiga ahaa iyo tilmaamaha. Waxay ahayd in la rakibo tuubbo sababta oo ah qaybo ka mid ah qasabaddii hore ma kala baxayaan ugu dambayntiina xirmooyinka ayaa loo baahan yahay beddelaad, sidaa darteed sidoo kale waan ku faraxsanahay inay iyaduna ahayd qiimo aad u weyn.
Tuubbo cabsi badan oo lacagta ah. Wuxuu la yimaadaa 3/8 rakibid riixid ah, taasoo ka dhigaysa mid si fudud ula qabsan kara qalabka rakibidda badankood.
Waxay leedahay tayada tuubada laba jibbaar qiimaha.
Waxaan ku rakibnay musqusha wax aan waxba tarayn oo cusub oo aan la iman qasabad, waxaan raadiyay qaar badan waxaanan ka helay midkan madow inuu ku isticmaalo halkaas oo ay ka heli karto qadar adeegsi ah, waa wax aad u fudud in la riixo / jiido. Way fududahay in la raaco warqadda la timid sanduuqa, adag, dhaldhalaalaya, muuqaal quruxsan Haddii kale, tani waa sahlan tahay in la rakibo tuubada waxayna u muuqataa runtii xarrago dusha sare ee dusha sare ee miisaanka giraantayada.